लिक भयो विग वोस १२ का कन्टेस्टटेन्ट लिस्ट !! यी ६ हट कलाकार बन्दै छन् घरका हिस्सा !! - Experience Best News from Nepal
लिक भयो विग वोस १२ का कन्टेस्टटेन्ट लिस्ट !! यी ६ हट कलाकार बन्दै छन् घरका हिस्सा !!
रियलिटी टीवी शो बिग बोस १२ को तयारी चलिरहेको छ, यस सिजन १६ सेप्टेम्बरबाट सुरु हुदै छ जुन केहि दिन मात्रै बाकी रहको छ। हर साल कलर्स टिभीमा प्रसारण हुने यो शो वलिउडका स्टार सलमान खानले हस्ट गर्ने गर्दछन।
बिग बोसका हर सिजन अगी प्रतियोगीको नाम गुप्त राखिने गरिन्छ, तर यो साल भने प्रतियोगीका नाम शो अघि नै लिक गरिएको छ। हामी सबैलाई लाग्छ कि कुन कुन कन्टेस्टेन्ट यो सिजनमा भित्रिदै छन् भनेर तर यो सिजनमा अग्रिम नाम लिक गरिएको छ। हालैमा यस सिजन बिग बोस १२ का निम्ति हुन् सक्ने कन्टेस्टेन्ट यी हुन सक्छन।
१) शालीन भनोट
शालीन एक टीवी एक्टर हुन् उनि डान्स शो नाच बलियको सिजन ४ का बिजेता हुन्, उक्त शोमा उनि दलजित कौरसंग बिजेता भएका थिए। उनि आफ्नो श्रीमतीसंग डिबोर्स लिईसकेका छन्, उनलाई आफ्नो श्रीमतीलाइ कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो। शालीन रियालिटी शोमा आउने कुरा थाह हुन साथ उनकी पत्नीले उनलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन।
२) सृष्टि रोडे
सृष्टि रोडे पनि एक टिभी एक्टर हुन् जो हालसम्म विभिन्न टिभी सिरियलमा काम गरिसकेकी छिन। उनले २०१०मा ‘ए इश्क है’ नामक टिभी सिरियलबाट आफ्नो अभिनयको सुरुवात गरेकी हुन्। साथै उनले सिरियल ‘इश्कबाज’मा समेत आफ्नो अभिनय देखाइसकेकी छिन। उनले यो शोका निम्ति कन्ट्रयाक साइन गरिसकेकी छिन।
३) सुबुही जोशी
स्प्लिट्सविल्ला रियलिटी शो सिजन ८ कि कंटस्टेंट भैसकेकी सुबुही जोशी यो सिजन बिग बोसकि समेत हिस्सेदार हुने भएकी छिन। उनि आफ्नो प्रेमी सिद्धार्थ सागरलाइ निकै चर्चामा आएकी थिइन्। आफ्नो प्रेमी को साथ सुबुही जोशी बिग बोस १२ मा इन्ट्री लिदै छिन।
४) स्कारलेट रोज
स्कारलेट पनि स्प्लिट्सविला रियालिटी शोको हिस्सा बनिसकेकी छिन, साथै बिग बोस १२ मा उनको सम्भावना निकै प्रबल रहेको छ। उनि आफ्नो हट तस्बिर लिई मिडियामा छाईरहेकी छिन। उनको सोसल मिडियामा समेत निकै ठुलो मात्रामा फलोवर रहेको बुजिन्छ। उनि आफ्नो इन्स्टाग्राममा समेत आफ्नो बिकिनी वाला तस्बिरहरु सार्बजनिक गरिरहेकी हुन्छिन। जसको तस्बिर निकै भारतीय फलोवरले मन पराउछन।
५) विभा छ‍िब्बड़
मसुर टिभी सिरियल ‘कसम से’ कि एक्ट्रेस विभा छ‍िब्बड़ समेत यस बिग बोस नया सिजनका निम्ति देखिने भएकी छिन। उनको साथमा उनको दुवै छोरा आउने कुरा रहेता पनि हाल भने उनि मात्रै आउने कुरा मिडियामा रहेको छ।
६) सुमेर पसरीचा
सुमेर पसरीचा पम्मी आंटीको नामले मसुर छिन। उनको पनि यस सिजन बिग बोसका निम्ति देखिने सम्भावना प्रबल रहेको छ। पम्मी आन्टीको नामले सोसिअल मिडियामा भाइरल यिनको भिडियोले उनि निकै चर्चित छिन र बिग बोसमा उनि हुदा दर्शकले निकै मनोरंजन बटुल्ने मिडियाको दाबी रहेको छ।
—–माथि को यो लेख हामीले भारतीय मिडियाबाट साभार गरेका हौं
करियर सकिएका यी ४ नाम चलेका कलाकारकै उद्धार गरे सलमान खानले !
सलमानको जीवनमा आएका ६ महिला, कसैसँग विवाहको कार्डसमेत छापियो त कसैसँग पुलिस केस !
‘भारत’को फस्ट लुकमा यस्तो देखिए सल्मान र क्याट्रिना ! हेर्नुहोस कहिले रिलिज हुदै छ भारत
फिचर : सलमान खानको भरत शूटिंगका उत्साहित तस्बिर !! साथमा हट पठानी !!
Big Boss -12Hot PhotosSalman Khan